सन् १८९४ मा उनको परिवारमा विद्युतयन्त्रमा व्यवसया टाट पल्टियो । त्यसैले आन्स्टाइनको परिवारले म्इुखिन छोडी इटालीको मिलान शहरमा बसाइ सर्ने निर्णय गर्यो । सन् १८९५ मा स्वअध्यनय गरेर म्यूरिच (स्विटजरल्याण्ड) को संघीय प्रविधि संस्थान (Federal Institute of Technology) मा प्रवेश परीक्षामा असफल भएपछि आफ्नो भविष्यका योजनाबारे एउटा निबन्धमा त्यस समयमा उनले लेखका थिए “यदि मेरो भाग्य बलियो छ भने म स्वीस संघीय विद्यालयको परीक्षा पास गर्नेछ । त्यहाँ म चार वर्षसम्म गणित र भौतिकशास्त्र अध्यनय गर्नेछु । अन्ततः इन्जिनियरिड्डको मोह त्यागी आराएको स्कूलमा एक वर्ष पढेपछि स्वीस संघीय बहु प्राविधिक विद्यालयमा गणित र भौतिकशास्त्र पढ्न भर्ना भए । यदि उनी इन्जिनियरिड्ड प्रवेश परीक्षामा सफ भएमा भए विश्वले महान् वैज्ञानिक तथा भौतिकशास्त्री आइन्स्टाइन पाउने थिएनन् । सन् १९०० अगस्तमा स्नातकको परीक्षा पास गरे । सन् १९०१ मा उनले स्वीटजरल्याण्डको नागरिकता लिए । सन् १९०९ मा आफ्ना साथी मार्सेल ग्रोसमानका बुबाले उनलाई स्विटजरल्याण्डको एक शहर बर्नको एक पेटेन्ट अफिमास तृतीय श्रेणीको विशेषज्ञको पदमा जागीर दिलाई दिए । सन् १९०५ मा ज्यूरिच विश्वविद्यालयबाट पी. एच. डी उपाधि प्राप्त गरे । सन् १९०९ मा आइपुग्दा आइनस्टाइन विश्वमा एक ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकका रूपमा स्थापित भइसकेका थिए ।
उनले आफ्नो यस सिद्धानत्मा प्रकाशको विद्युतीय असरको बारेमा विस्तृत रूपमा व्याख्या गरेका छन् उसमा उनले पदार्थमा विद्युतीय धार (Electric Current) को उत्पादन कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा वर्णन गरेका छन् । यसमा जन पोटासियम, टड्ढसटन जस्ता धातुमा प्रकाश ढाकिन्छ, तब ती धातुबाट इलेक्ट्रोन बाहिर निस्कन्छ । त्यस्ता इलेक्ट्रोनलाई फोटो इलेक्ट्रोन र तयो असरलाई फोटो विद्युतीय असर (Photoelectric Effect) भनिन्छ । यसै महान् कार्यको कदर स्वरूप उनलाई सन् १९२१ मा भौतिक शास्त्रतर्फको नोवेल पुरस्कार प्रदान गरियो । यसै नियमको प्रयोगबाट नै सोलार सेल (Solar Cell) को विकास भएको हो र सौर्य ऊर्जालाई आजको बैकल्पिक ऊर्जाको रूपमा लिन सकिएको हो ।
उनका शान्ति प्रजातनत्र र समानताप्रतिको प्रतिबद्धता यस्तो थियो: कुनैपनि वस्तु र स्थानका बारेमा छनौट रहेसमम म त्यो देशमा मात्र बस्ने थिए जहाँ कानूनी छनौट स्वयम कारवाही हुनु अगावै आम वा गरिरहने जनस्वतनत्रता । सहिष्णुता र समानता कायम रहोस् । प्रजातन्त्रमा अधिकार र वर्तमानका बारेमा उनको धारणा थियोः सत्यको खोजी गर्ने अधिकार एक कर्तव्य पनि हो । तर सत्य सहित भईसकेपछि त्यसको कुनै पनि अंशलाई कसैले पनि दबाउनु हुँदैन ।
उनले विज्ञानलाई जहिले पनि व्यवहारमा र सामाजिक जनजीवनमा उतार्नुपर्दछ भन्ने ठान्दथे । विज्ञान समाजभनाद टाढा हुनुहुादैन, बरू समाजमा एककार गर्नुपर्दछ भनी भन्दथे । सापेक्षतावादमा सिद्धानतलाई सरल भाषामा भनदथेः जब एक जना केटो सुन्दरी केटसिाग् गफगाफमा भुल्दछ, उसलाई एक घण्टा भनाद बढी समय लाग्दछ । सापेक्षतावादमा सिद्धान्त भनेको नै यही हो । शिक्षाको बारेमा उनको धारणा थियोः शिक्षाको साँचो उद्देश्य भनेको मानिसको मस्तिष्कलाई सोच्ने बनाउन तालिम प्रदान गर्नु हो । तसर्थ शिक्षा अमूल्य छ ।”
सौर्यमण्डल (Solar System) भनेको के हो ? सुर्य, चन्द्रमा र ग्रहको बारेमा चर्चा गर्नुहोस ? →